Wondershare Dr.Fone Maka iOS - Wụnye, Update na Uninstall
Wụnye, Update, Uninstall
Naghachi Data si iOS Ngwaọrụ
Akwado Devices & Files
Naghachi faịlụ site iPhone / iPad / iPod aka
Naghachi Data si iTunes ndabere
Akwado Files & Devices
Naghachi Data si iTunes ndabere File
Naghachi Data si iCloud ndabere
Naghachi Data si iCloud ndabere File
Nzọụkwụ ịrụzi iOS Sistem
Bido: Wụnye, Update, Uninstall
E nwere ihe ole na ole accesses ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ị pụrụ ịhụ download buttons na ngwaahịa page, tech spec page, n'elu nke ndu page, ma ọ bụ ọbụna nri n'ebe a. Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ virus-free. Na-eche free download echichi ngwugwu na kọmputa gị.
Mgbe nbudata Wondershare Dr.Fone maka iOS echichi ngwugwu, gaa na nchekwa ebe ị zọpụta echichi ngwugwu. Abụọ-pịa .exe faịlụ na-agba ọsọ software ọkachamara ntọlite.
Mgbe windo na-egosi na "Wụnye" button na ya, pịa Wụnye button, na-ekwe usoro ihe omume ịrụcha wụnye usoro.
Mgbe ị wụnye software ịga nke ọma, ị na-kwesŽrŽ pịa "Malite Ugbu a" bọtịnụ ẹkedori ya.
Mgbe launching Wondershare Dr.Fone maka iOS free ikpe version, a mmapụta ga-apụta, na-arịọ gị ka ị na-abanye na ikikere email na ndebanye aha na koodu. Ọ bụrụ na ị adịghị akwụ ụgwọ maka zuru version, ị nwere ike pịa "Zụrụ ugbu a" button iji kwụọ ụgwọ maka software dị ka achọrọ. Mgbe ahụ, detuo registration koodu gị email ma n'oge gara aga ya na registration koodu igbe. Mgbe ahụ, pịa "Mee ọ rụọ ọrụ."
Mkpa: na unregistered version, ya bụ ikpe mbipute bụ na-enwe ike iṅomi gị iOS ngwaọrụ, iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere faịlụ maka ehichapụ ọ bụ furu efu faịlụ. Ị nwere ike iji ya iji lelee ma faịlụ na ị na-ehichapụ ọ bụ furu efu na-recoverable ma ọ bụ. Mgbe ọ na-abịa naghachi data, ị ga-aha software mbụ.
Ihu ọma, e nwere 2 ụzọ ego maka mmelite nke Wondershare Dr.Fone maka iOS:
Way 1. Run Wondershare Dr.Fone maka iOS. Na rịbọn, pịa ikpeazụ akara ngosi ikpughe ndọpụta ndepụta. Site n'ebe ndepụta, ị pụrụ ịhụ nhọrọ "Lelee maka mmelite". Pịa ya ego maka update. Ọ bụrụ na onye update dị, pịa "Update Ugbu a," ka-esi ọhụrụ version.
Way 2. Mgbe ọ bụla e nwere ihe update dị, a mmapụta ga-apụta, mgbe ị malite Wondershare Dr.Fone maka iOS. Site mmapụta, ị nwere ike họrọ ibudata ọhụrụ version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS.
Iwepu Wondershare Dr.Fone maka Dr.Fone maka iOS bụ mara mma dị mfe. Pịa "Malite" bọtịnụ na ala ekpe gị na kọmputa> ahọrọ "Control Panel"> Mmemme> pịa "iwepụ a Mmemme". Chọta Wondershare Dr.Fone maka iOS na nri-pịa ya. Na esiri-ala menu, pịa "Uninstall" na-eso ntụziaka iwepụ Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị.
Ọzọ: akwado Devices & Files